Momba anay | HONGGUANG HANDAN CAST FOUNDRY CO., LTD
Manodidina ny 200 mu ny velarany.
Miisa 450 ny mpiasa sy ny mpiasa.
Famoahana isan-taona an'ny casting 30 000 taonina
Ny orinasa dia nandalo ny rafitra BSI sy ny fanamarinana ny vokatra, tamin'ny alàlan'ny ISO14001: 2004 fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, OHSAS18001 mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana; mifanaraka tanteraka amin'ny EN124 sy ny fenitra iraisampirenena momba ny fitsapana. Ny fitaovana fanandramana lehibe: fitaovana famakafakana singa simika, spectromèter, mikraoskaody metaly, mpandinika haingana lafaoro, milina fanandramana ara-batana eran-tany, testeran'ny hamafin'ny Brinell, laboratoara fasika, fanandramana tsindry fantsom-pifandraisana nomerika, laboratoara hydraulic hydraulic, sns.
Ny vokatra dia manarona vokatra marobe, ao anatin'izany ny fifandraisana, ny herinaratra, ny fantsom-pamokarana injeniera, ny seranam-piaramanidina sy ny fotodrafitrasa kaominaly ampiasaina amin'ny fonosana vy vy, fonosana, fantson-tsolika, kojakoja automatique, kojakoja milina, kojakoja momba ny milina fambolena, fandrahoana vy, kojakoja fiompiana ary andiany lehibe fito hafa, karazany 1500 mahery.